सेतो पानी बगिरहने समस्याले हैरान हनुहुन्छ ? यसरी गर्नुहोस् घरमै उपचार ! – Jagaran Nepal
सेतो पानी बगिरहने समस्याले हैरान हनुहुन्छ ? यसरी गर्नुहोस् घरमै उपचार !
काठमाडौँ । महिलाहरुको यौनाङ्गबाट सेतो वा हल्का पहेलो खालको पानी बग्ने प्राकृतिक प्रक्रिया हो, ल्युकोरिया (Leukorrhea) ।महिनावारी सुरु हुने उमेरका किशोरीहरुदेखि महिनावारी रोकिएका महिलाहरुसम्म अर्थात् सामान्यतः प्रजनन उमेर समूह (१५ वर्षको उमेरदेखि ४९ वर्ष उमेरसम्म) का महिलाहरुमा हुन सक्ने नितान्त प्राकृतिक र सामान्य चक्र हो ल्युकोरिया।
महिलाको योनीबाट सेतो रंगको, चिपचिप खालको पानी बग्नुलाई स्वास्थ्यको भाषामा ‘ल्युकोरिया’ भनिन्छ। यो भनेको हाम्रो शरीरले स्वतः महिला प्रजनन अंगको सफाइ गर्ने प्राकृतिक प्रक्रिया हो।
यो प्रक्रियाले योनीको भित्री भागलाई सफाइ गर्ने, त्यस क्षेत्रको पीएच मानलाई आवश्यक मात्रामा राखेर व्याक्टेरिया, ढुसी वा अन्य कुनै पनि किसिमका संक्रमणहरुबाट यौनाङ्गलाई बचाउने काममा सहयोग गरिरहेको हुन्छ। यस अर्थमा ल्युकोरिया उपयोगी प्रक्रिया नै हो।
तर प्रकृतिले निर्धारित गरिदिएको त्यो उपयोगी प्रक्रियामा पनि कहिलेकाहीँ गडबडी देखापर्न सक्छ। त्यस्तो गडबडी देखापर्नु चाहिँ समस्याको सूचक पनि हो।सेतो वा हल्का पहेलो खालको पानी बग्ने आम महिलामा हुने समस्या हो । यसले महिला स्वास्थ्यमा ठूलो असर पनि गर्छ।महिनावारीको अघिपछि यस्तो पानी बग्नु धेरैको समस्या हो। कतिपय अवस्थामा यो अधिक मात्रामा हुने गर्छ। यसले अन्य रोगको संकेत पनि गर्नेगर्छ।
सेतो पानी बग्ने कारण
आफ्नो संवेदनशील अंगको ठिक रुपमा सफाई नहुनु, कुनैपनि स्थितिमा धेरै हतोत्साहित हुनु, बिरामी मानिससँग सम्बन्ध राख्नु, पटक पटक गर्भपतन गराउनु।कुनै रुपमा संक्रमण या बिरामीको कारण, शरीरमा पोषक तत्वको कमी हुनु आदि ।
यस रोगका लक्षणहरु
चक्कर आउनु, शरीरमा थकावट हुनु, संवेदनशील अंग चिलाउनु, शरीरमा कमजोरी महसुस हुनु, संवेदनशील अंगबाट दूर्गन्ध आउनु, कब्जियत एवं टाउको दुखाई हुनु ।
काठमाडौंमा आजदेखि भेरोसेल खोप लगाइँदै, कलंकी क्षेत्रको वडा कार्यालयमा२४ घण्टामा कुन जिल्लामा कति संक्रमित थपिए ?
आफ्नो संवेदनशील अंगलाई पूरा रुपमा सुख्खा र सफा राख्नुपर्छ । जसरी भएपनि संक्रमण फैलिने समस्या कम गराउनुपर्छ ।महिनावारीको समयमा सफाईको पूरा ध्यान दिनुपर्छ । हरेक ४ देखि ६ घण्टापछि प्याड बदल्ने गर्नुपर्छ । हल्का पानीले यसलाई सफा गर्नुपर्छ । सुख्खा वा सुतीको कपडाबाट आफ्नो संवेदनशील अंगको सफाई गर्नु राम्रो हुने चिकित्सकहरुको सुझाव छ ।
ल्युकोरियाको समस्या शरीरमा कमजोरीको कारणले हुने गर्दछ । यसको लागि आफ्नो खानामा पोषण युक्त चिजलाई समेत सामेल गर्ने गर्नुपर्छ । जसबाट हाम्रो शरीर पूरा रुपमा स्वस्थ रहन्छ ।
यसबाट बच्ने घरेलु उपाय
राति भिजाएर राखेको अन्जीरलाई बिहान पानीमा पिसेर खाली पेट खाने गर्नुपर्छ । आफ्नो डाइटमा केरा पनि मिसाउने गर्नुपर्छ ।फिटकिरीलाई तातो पानीमा भिजाएर त्यसले आफ्नो संवेदनशील अंगको सफाई गर्ने गर्नुपर्छ । यस्तो गर्दा एक हप्तामा नै सेतो पानी बग्ने समस्याको समाधान हुने गर्दछ ।
चामल उमालेर त्यसैमा रहेको पानीले आफ्नो संवेदनशील अंगको सफाई गर्नुपर्छ ।१ लिटर पानीमा अदुवालाई राम्रोसँग उमालेर जब पानी आधा हुन्छ त्यसपछि पिउने गर्नुपर्छ ।
गुलावको पत्तालाई सुख्खा गरेर पाउडर बनाउने गर्नुपर्छ । दैनिक दूधको साथमा यसको सेवन गर्ने गर्नुपर्छ । मेथीको पानीबाट पनि संवेदनशील अंगको सफाई गर्न सकिन्छ । यसको साथमा हामी मेथीको धुलोलाई पानीमा राखेर पनि लिन सकिन्छ ।भुटेको चनालाई सख्खरको साथमा मिसेर दूध वा घिउको साथमा मिलाएर दैनिक यसको सेवन गर्न सकिन्छ।